Qoysaska & Ardayda - Koleejooyinka Hore ee Colorado
La'aan Tamarta, hawlgelinta, iyo xamaasada aan kaheleyno qoysaskeena iyo ardayda CEC, dugsiyadeena waligood awood uma lahan inay gaaraan awoodooda buuxda. Waxaan qiimeyneynaa muhiimadda iskaashigan waxaanna u heellan nahay bixinta qalabka iyo macluumaadka loo baahan yahay si looga dhigo mid u kobca oo ugu guuleysta heer kasta.
Adeegyada CEC Cuntadu waxay aaminsan yihiin in cuntada cusub ee la sameeyay ay beddeli karto adduunka. Waxaa naga go'an inaan abuurno cunno dhadhan fiican leh oo nafaqo leh oo leh moodeel barnaamij dugsi-ilaa-dugsi oo ku baahsan dhammaan xarumaheena. Barnaamijkeena quraacda iyo qadada wuxuu siiyaa cunno awood u siisa ardaydeena si ay u siyaadiyaan yoolalka waxbarashadooda iyagoo ka dhigaya qof kasta oo soo gala makhaayadayada inay ogaadaan inay ka mid yihiin bulshada iyaga qiimeeysa.
Qaar ka mid ah kuwa wax iibiya ee maxalliga ah waa Beeraha Shimbiraha Cas, Caano Royal Crest iyo hilibka lo'da ee laga quudiyo shirkadda Lone Pine Cattle Company of Red Feather.
CEC Qoysaska & Ardayda, Macluumaadku wuxuu ku jiraa Farahaaga. Soo Degso App-ka Infinite Campus Maanta si aad ugu xirnaato!
Ka Gal Xarunta Infinite Web-ka ee Webka - Ardayga & Xarunta Waalidka
Ardayda Campus iyo Waalidka Campus waxaa loogu talagalay inay bixiyaan waqtiga-helitaanka macluumaadka ardayda. Naqshadeynta qaab fudud loo adeegsado waxay soo bandhigeysaa waxa hadda ka dhacaya fasalka si aad u fahmi karto, ula socon karto, ugana qeyb geli karto nidaamka waxbarashada.
Soo Degso Barnaamijka Infinite Campus Mobile - Ardayga & Waalidka
Ogeysiis / Digniin / Fariimo Muhiim ah
Si dhakhso leh u arag ogeysiisyada dugsiga CEC sida loogu dhejiyo.
Ku darso casharrada fasal gaar ah ama taariikhda ugu dambeysa.
Dib u eeg dhacdooyinka xaadiritaanka si kooban iyo qaab faahfaahsan.
Helitaan deg-deg ah oo loogu talagalay buundooyinka marka la dhajiyo.
Dib u eeg jadwalka meel kasta, waqti kasta.
Wax badan ka baro infinitecampus.com/waalidiinta-ardayda
Infinite Campus Mobile Apps waxaa lagala soo bixi karaa Apple App Store ama Google Play Store
Isku xirayaal gacan qabasho leh si aad ugu gasho Xariirka Ardayga ama Waalidka Infinite Campus Portal
Soo Galitaanka Waalidka
U Gudbi-A-Friend Kulliyadaha Hore ee Colorado waxaadna u qalmi kartaa inaad hesho illaa $ 100! *
Waxaan runtii u mahadnaqaynaa dadka ku faafaya ereyga ku saabsan CEC waana kan sida barnaamijkeenna Tixraac-Saaxiib u shaqeeyo si loo muujiyo qaddarintaas:
- Waxaad u sheegtaa saaxiib ku saabsan Koleejooyinka Hore ee Colorado iyo taas saaxiibku wuxuu dhammeystirayaa nidaamka diiwaangelinta CEC mid ka mid ah dugsiyadeenna ama barnaamijyadeena.
- Waxaad buuxineysaa foomkeena Tixraac-Saaxiib oo waxaad soo gudbineysaa ugu dambeyn Oktoobar 1deeda.
- Haddii saaxiibkaa ku sii jiro diiwaangelinta illaa 31-ka Oktoobar ee simistarkooda koowaad, waad heli doontaa ikhtiyaar $ 100 hadiyad ah oo loogu talagalay ardayga Waqti-buuxa ah ama $ 50 Hadiyad ikhtiyaar u ah ardayga Waqti-dhiman ah!
* Fadlan la soco xeerarka soo socda iyo xayiraadaha ee barnaamijka Tixraaca-Saaxiibka CEC:
Kaliya hal magac tixraac ah foomkiiba waa la aqbali doonaa. Foom gooni ah waa in loo gudbiyaa arday kasta oo mustaqbalka.
Hal ikhtiyaar oo hadiyad ah ayaa la siin doonaa arday kasta. Haddii foomam badan oo gudbin ah loo helo isla ardayga, foomka ugu horreeya ee la soo gudbiyo ayaa la sharfidoonaa
CEC waa ka mamnuuc sharciga inay bixiso hadiyado tixraac ardayda hada jirta, walaalaha ardayda hada dhigata, ama ardayda isku reerka ah ee qofka tixraaca ah.
Adeegyada Gaadiidka ee CEC
Kooxdayada Adeegyada Gaadiidku waxay aaminsan yihiin in hubinta helitaanka saxda ah ee waxbarashadu ay ka bilaabmayso ardaydeenna oo si nabadgelyo ah ugu socdaalaya ama uga soo noqonaya dugsiga, iyadoon loo eegin qaabka safarkoodu yahay. CEC waxay hada bixisaa adeegyo bas oo tagaya kana imanaya Aurora, Castle Rock, Colorado Springs, Inverness, Parker iyo Windsor kambuyuutar tiro kooban oo ardayda ah waxayna soo bandhigaan codsi baska lagu daba galayo oo lagu bixinayo ogeysiisyada waqtiyada imaatinka, dib u dhaca iman kara iyo macluumaadka kale ee muhiimka ah.
Nidaamka isdiiwaangelinta ee ardayda si ay u helaan adeegyada baskeena ayaa la diyaariyay inta lagu gudajiro nidaamka diiwaangelinta.
Agaasimaha Adeegyada Gaadiidka